Warshad shumac sokor jumlo sokor jumlo iyo soosaarayaasha | Winby
shumaca wax soy
Galaas soy wax shumac udgoon
Shumacyadeena soyka waxaa lagu sameeyaa wax soy dabiici ah, si siman u gubanaya oo aan qiiq madow lahayn, ka caafimaad qab, waxyeello u lahayn deegaanka jirka bina'aadamka. Shumacyo noocyo kala duwan leh, oo ku habboon muuqaallo kasta. Sidoo kale weelka dhalada ayaa amaan ah lana qaadan karaa. Waxaan bixinaa adeegga macaamiisha ODM OEM.
Cabbirka: Ballaca6.2cm * Dhererka7.6cm
Shumac shay cabir shumac yar udgoon leh
Shumaca Soy wax shumac udgoon leh tayo sare leh, astaan ​​iyo cabir waa la habeyn karaa. Sidoo kale bixi adeeg muunad ah.
Shumacyada carafta leh ee carafta leh Ma aha oo kaliya hawo qaboojiyaha laakiin sidoo kale neerfaha ayaa dejiya oo yareeya walwalka. Waxaa loo isticmaali karaa hurdo la'aan, dhexdhexaadin, ka saarista urta, iwm. Udgoon badan iyo udgoon muddo dheer soconaya ayaa kaa dhigaya mid raaxo leh.
Waxyaabaha Muraayad aan caadi ahayn + wax soy ah + dabool bir ah
Cabir D6.3cm * H7.6cm
Waqtiga gubashada 16 saacadood
Culayska wax 90g
Miisaanka guud 245g
Hore: 7.8 inji dherer Paraffin shumac tiir
Xiga: shumac hufan shumac udgoon
Shumaca Soy Wax
Wax Soy Shumac Wax
Wax Soy Loo Sameeyo Shumaca
Wax Soy Wixii Shumacyo ah
shumacyo yaryar oo udgoon shumacyo
Ubax qalalan naqshad gaar ah galaas gel wax wax udgoon ...
iib kulul shumac udgoon udgoon
shumacyo yaryar oo udugga udgoon
Shumaca weelka dhalada ah ee shumaca shumaca